Kicheni Sink Musanganiswa Mushonga NeKuburitsa-Kunze Spray Yakakweshwa Nickel
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Out Faucets Kicheni / Kicheni Sink Musanganisi Bata Nedhonza-Kunze Spray Yakakweshwa Nickel
Iyi isinganzwisisike pombi yemukicheni ine inochinjika hunhu iri chaiyo epitome yekuvimbika. Iyo yakasarudzika chaizvo kicheni faucet mannequin uye inoonekwa seimwe yemhando yayo fomu. Chigadzirwa chinowedzera chine dhonza-pasi sprayer. Mumwe anogona zvakare kungo maneja kufambisa kwemvura nenzira yeiyo zvediki katuriji. pombi iyi ine kudzivirira kwakazara kwekudonha uye mashandiro ekuchengetedza. Pombi yekicheni inowedzera ine seti yakapusa uye inogona kunge yakasimba.
Kupa yepamusoro uye hukuru, iyi imwechete-mubato singi pombi inounza inoyevedza dhizaini kuenderera kukicheni. Iyo yakasungirirwa lever inobata pamwe inopa zvakapusa manejimendi tembiricha yemvura uye kushushikana, nepo ruvara-rwakaenzana-rwunodhonzera-kunze musoro wemusoro unopa kuchinjika kune akasiyana siyana mabasa ekuchenesa. Pakubata bhatani, iyo sprayhead inoshanduka kubva parwizi rune mweya kuenda kune yakasimba spray.
Maviri-mashandiro ekudhonza-kunze kwepamusoro wemusoro unobvumidza iwe kuti uchinje kubva kuaerated rwizi kuti upfuure.
Ceramic disc mavharuvhu anopfuura bhizimusi hupenyu hurefu zvinodiwa, zvichisimbisa yakasimba kushanda kwenguva dzese.
chinyararire chakarukwa hosipaipi uye swiveling bhora mubatanidzwa unoita wekudhonza-kunze sprayhead yakapusa uye yakawedzera snug kushandisa.
sprayface sarudzo yekureruka-kuchenesa pasi inodzivirira mamineral buildup.
Lever imwechete inobata nayo yakananga kushandisa uye inoita kugadzirisa tembiricha yemvura iri nyore.
Tembiricha reminiscence inobvumidza pombi kuvhenekwa uye kubviswa pane tembiricha yakatarwa mukushandisa kwese kusati kwaitika.
B *** d2021.02.14
Chinhu ichi chakashanda kwazvo pachinangwa changu. Kuisirwa kwaive kwakananga mberi uye nyore. Iyi kambani inotaurirana uye inoita nekukurumidza kupindura mibvunzo nezvimwe.
M *** l2021.04.25
Pombi yakagadzirwa zvakanaka uye pombi yekupfapfaidza yakasimba. Huremu hwakawedzerwa hwekubatisa paipi inobatsira kuchengetedza mubato wespay wakakwidzwa. Basa revatengi rakanakisa!